MAQAAL: Jamaahiirta Man United Oo Bilaabay “Mourinho Out” Kadib Guuldaradii Sevilla Iyo Hadaladii Uu Sida Aan La Rumaysan Karin Saxaafada Uga Horsheegay. – GOOL24.NET
MAQAAL: Jamaahiirta Man United Oo Bilaabay “Mourinho Out” Kadib Guuldaradii Sevilla Iyo Hadaladii Uu Sida Aan La Rumaysan Karin Saxaafada Uga Horsheegay.
Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa biyo kulul ugu dhex jira hadaladii uu saxaafada ka hor sheegay kadib guuldaradii kooxdiisa Red Devils ka soo gaadhay Sevilla. Guuldarada soo gaadhay Manchester United ee kulankii Sevilla waxaa jamaahiirta Man United kaga darnaaday qaabkii uu Jose Mourinho uga hadlay iyo falcelintii layaabka lahayd ee uu sameeyay.
Haddii jamaahiirta Manchester United ay markii hore la murugaysnaayeen guuldaradii Sevilla ay kooxdooda kaga cidhibtirtay UEFA Champions League iyo qaabkii liidatay ee ay Red Devils u ciyaartay 180 kii daqiiqo ee ay kooxda ree Spain ka hor timid, waxaa layaab ku noqotay sida uu macalinka kooxdoodu u jawaabay waqtiga adag ee ay ku jireen.
Laakiin qaar ka mid ah saxaafada iyo waliba jamaahiirta kubbada cagta aduunka ayaa u arkay in hadalkii Mourinho uu ahaa mid loo fasiran karo in uu xataa isaga laftiisu ku maadsaday kooxda uu maamulayo maadaama oo uu sheegay in laba jeer uu Old Trafford ku reebay Manchester United oo ayna ahayn wax cusub in Red Devils garoonkeeda lagu reebaa.
Mid ka mid ah odhaahdii Mourinho uu jamaahiirta Man United sida wayn ugaga cadhaysiiyay waxaa ka mid ahaa hadalkii uu ku yidhi: “Kursigan laba jeer ayaan ku soo fadhiistay mar Porto ah oo ay United ka hadhay, iyo Real Madrid oo ay United ka hadhay, kani wax cusub iyaga kuma aha”.
Hadalkan ayaan loo qaadan karin mid ka yimid tababare Manchester United ah waxayna haddaba qaar ka mid ah jamaahiirta Man United bilaabeen olole la mid ah midka aduunka caanka ka ah ee “Wenger out” oo kale iyaga oo bilaabay “Mourinho Out”.
Erayada ay soo qaateen jamaahiirta Man United waxaa ka mid ah in Mourinho uu burburiyay Anthony Martial, in uu burburiyay Marcus Ranshford, in uu burburiyay Alexis Sanchez waxayna isticmaaleen erayo aflagaado ah oo ay ku soo bandhigeen cadhada ay ka qaadeen guuldarada Man United ka soo gaadhay Sevilla iyo waliba qaabkii uu Mourinho uga jawaab celiyay.
Waxyaabaha layaabka leh ee uu Mourinho ka hadlay kadib guuldaradii Sevilla waxaa ka mid ah in Liverpool ay wali baaqi ku sii tahay UEFA Champions League isaga oo ku dooday in ay iyaguba ka maqan yihiin FA Cupka oo ay kooxdiisa Man United ku jirto!.
Xidhiidhka jamaahiirta Manchester United iyo Jose Mourinho ayaan markii horeba ahayn mid fiican maadaama oo ay iskugu dhaceen eedaymo uu saxaafada u mariyay isaga oo ku tilmaamay kuwo iska aamusan oo aan Old Trafford xaamsad u yeelin wuxuuna tusaale u soo qaatay kooxda yar ee Bournemouth garoonkeeda iyo xaasada uu leeyahay.
Laakiin waxay hadda u muuqataa in xidhiidhkii Mourinho iyo jamaahiirta Man United uu gaadhay heerkii ugu xumaa tan iyo markii loo magacaabay shaqada Red Devils. Jamaahiirta Man Uited ayaa lagu tilmaamay kuwa England ugu fiican iyada oo garoomada Anfield iyo Old Trafford ee habeenada Champions League loo arko astaanka England balse Mourinho ayaa taas ka hor yimid waxayna hadda jamaahiirta United wadaan olole looga soo horjeedo.
Haddaba akhriste haddii aad tahay taageere Man United ah, siddeed u aragtaa hadaladii Jose Mourinho ee kadib kulankii Sevilla? Miyay jamaahiirta Old Trafford macalinkooda Mourinho ka heleen wixii ay ka filayeen?.
anigu shaxda kohor ayaan lahaa jose out waayo man u waxa uu kadhigay koox baqda oo difaac gashay inta ugu badan ee ay ciyaarayso kubada ( jose out !!!! ) ayaan leeyahay ana thanks gool24.net
Khadar dc says:
Eey eey dhalay waaye mourinho kan toobare mahan
Shaxda uu kusooo galay waan la yaabay